MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA TARANKA EEYAHA DHIIG-BAXA AH - EEYAHA
Macluumaadka iyo Sawirada Taranka Eeyaha Dhiig-baxa ah
Liiska eeyaha Dhiigga Isku-dhafan ee Dhiig-baxa ah
Dhiig-baxa waa eey aad u xoog badan, eey dabacsan. Dhabarka ayaa aad ugu xoogan cabirka eyga. Madaxa ayaa dheer oo cariiri ah marka loo eego eeyga dhererkiisa, iyo inuu u dhigmo jirka. Afku wuu dheeryahay sankuna waa madowyahay. Indhaha si qoto dheer u daadanaya ayaa ah qaab dheeman ah sababtoo ah daboolka hoose ee hoos loo jiidayo loona weecinayo daboolka culus ee sare. Midabku wuu ku kala duwan yahay hazel qoto dheer oo jaalle ah. Dhegaha khafiifka ah, jilicsan, ee soo daadanaya ayaa la dhigay kuwo aad u hooseeya oo aad u dheer. Dhiig-baxa wuxuu leeyahay waxyaabo badan oo dheeri ah, maqaarka duuduuban oo si xad dhaaf ah u laalaada, xitaa si ka sii badan hareeraha madaxa iyo qoorta halkaasoo ay ku laalaaban tahay laamo qoto dheer. Dewlap-ka ayaa aad loogu dhawaaqaa. Muruqyada, lugaha hore waa toosan yihiin. Dabada waxaa lagu qaadaa sare iyadoo qalooca yar uu ka sareeyo safka kore ee dhabarka. Laalaabka maqaarku wuxuu ku caawiyaa eeyga inuu ku haysto qaybaha urta inta lagu raad joogo. Koodhku wuu duuduuban yahay, gaaban yahay oo muuqaalkiisu adag yahay, timo jilicsanna dhegaha iyo dhakada. Midabbada waxaa ka mid ah madow & cagaar, beerka & tan, casaan & cows iyo casaan. Mararka qaar waxaa jira qadar yar oo cadaan ah oo ku saabsan laabta, cagaha iyo caarada gadaasheeda.
Dhiig-baxa waa nooc, dulqaad leh, sharaf leh, edeb-yar oo jecel. Si naxariis leh, kalgacal leh oo aad ugu fiican carruurta, tani runti waa wehel dabeecad wanaagsan. Eeyahaani waa kuwo dabeecad wanaagsan oo ay halkaas jiifsan doonaan si tartiib tartiib ah carruurta ugu oggolaan inay ku soo wada dhacaan. Noocani wuxuu jecel yahay dhammaan dareenka ay ka helaan iyaga. Si aad ugu cadaalad sameyso Dhiig baxaaga, hubi in caruurtaadu ayan kufsan ama dhaawicin eeyga, maxaa yeelay Dhiig-jireyaal ayaa halkaas fariisan doona oo qaadan doona. Bannaanka aad u firfircoon oo buuq badan markii uu da 'yar yahay, oo go'aansan oo madaxbannaan, Dhiig-baxa wuxuu u baahan yahay tababar adag, laakiin uma baahna tababar gacan culus. Mulkiile soo bandhiga wax aan ahayn a dabiici ah, xasiloon laakiin awood adag waxay soo saaridoontaa xarrago kas ah. Milkiilaha cusub ee Dhiig-baxa wuxuu u baahan doonaa inuu yeesho dulqaad badan isla markaana yeesho xeelad weyn oo ku aaddan hoggaaminta joogtada ah ee tababarka si loogu guuleysto. Xeerar cad u baahan in la dejiyo oo la raaco. Hadaad muujiso calaamadaha ahaanshaha milkiil qabow , Eygan ku maqli maayo. Ha filan wax badan adoo adeecaya eeygan. Iyagu dabiici ahaan waa xayawaan jilicsan laakiin ma sahlana in la adeeco. Haddii ay yeeshaan wax caraf ah way adkaan kartaa in dareenkooda dib loogu soo celiyo haddii aad ka baxsan tahay noocyada jir ahaaneed ee iyaga ka mid ah. Ragga waxay soo maraan qaan-gaar inta udhaxeysa da'da 1 iyo 2 sano. Waxay noqon karaan kuwo aad u tiro yar wakhtigaas midna runtii wuxuu u baahan yahay inuu hubiyo inay yihiin a hogaamiye xirmo adag , laakiin ka dib da'da 2, oo leh hoggaan habboon, tababar, dhiirrigelin iyo joogtayn, xoogaa way yareyn doonaan. Bulsho wanaagsan si looga hortago inay noqdaan kuwo xishooda. Aad bay muhiim u tahay in eeygan loo qaado a socod baako maalinle ah . Dhiig-baxa oo ka maqan jimicsi maskaxeed iyo / ama jireed way adkaan doontaa in la maareeyo. Dhiig-baxa wuxuu u heellan yahay sayidkiisa oo wuxuu si wanaagsan ula noolaadaa dadka. Eygan qof walba wuu jecel yahay qaarna farxad ayey ku salaami doonaan martida la doonayo iyo kuwa aan la rabin. Qaar kale ma soo dhaweynayaan martida aan loo baahnayn. Waxay ilaalin karaan aaggooda haddii qofna uusan gurigiisa joogin, laakiin marka ay ku socdaan raad, waxay soo dhaweynayaan qof walba. Qaarkood way ciyi doonaan oo way ku ogeysiin doonaan marka shisheeyaashu ay ag joogaan. Waxay kula noolaan karaan si deggan ula eeyaha kale iyo xayawaanka guryaha ku jira. Dhiig-baxa waa dayuuradaha oo waxay leeyihiin u janjeera inay khuuraan oo ay cabaadaan. Sankooda waa kuwo aad ufiican oo ay ku adagtahay inayna ka wareegin caraf xiisa badan kadib. Waxa kale oo laga yaabaa inay ku uriyaan bini-aadamka meelaha loo arko inaysan ku habboonayn. In kasta oo aadanuhu u arko inay tani tahay edeb darro, eeygu runti wax badan buu ka baranayaa iyaga. Dhiig-qulqulayaashu waxay awoodaan inay raacaan wax kasta oo caraf ah, xitaa bini-aadam-waa awood naadir ah eeyga. Noocan ayaa la sheegay inuu si guul leh u raaco wadiiqooyinka in ka badan 100 saacadood jira. Isagu waa go'an yahay in lagu yaqaan inuu la joogo raadku in ka badan 100 mayl. Dhiig-baxa waa sida hubi raad raac in noocyada loo isticmaalo adduunka oo dhan samatabbixin iyo dambi baaris. Caddaynta dhiig-baxa waa la aqbali karaa maxkamadda sharciga. Mid ka mid ah Dhiig-qulqulka ayaa keenay illaa 600 oo dambi qabasho iyo xukunno ah. Dhiig-qulqulayaashu marna laguma hayn karo daarad deyr ah. Waxaa jira fursad wanaagsan oo macquul ah oo u horseedi doonta inay ka warwareegaan hadday xarigga ka maqan yihiin. Way cararaan markii ay kudhacaan dareen udgoon iyaga kaxeeya si ay u helaan dhamaadka wadada.
Dhererka: Ragga 25 - 27 inji (63 - 69 cm) Dumarka 23 - 25 inji (58 - 63 cm)
Miisaanka: Ragga 90 - 110 rodol (41 - 50 kg) Dumarka 80 - 100 rodol (36 - 45 kg)
30 40 rodol oo ey ah
Noocani wuxuu u nugul yahay buunbuunin . Waa inaad quudisaa laba ama saddex cunto yaryar maalintii halkii aad ka isticmaali lahayd mid weyn. Ka fogow jimicsiga cuntada ka dib. Qaarkood waxay la xanuunsadaan calool xanuun. Ku soo dhowaanshaha sinta dysplasia, isha cherry , infekshannada dhegaha iyo entropion, halkaas oo baalasha indhaha ay u rogmadaan gudaha. Sariir suufan ayaa lagula talinayaa si looga fogaado wicitaannada ku dhaca laabatooyinka.
Dhiig-baxa ayaa ku fiicnaan doona aqalka dhexdiisa haddii si ku filan loo jimicsado. Iyagu waxoogaa dhaqdhaqaaq ah kuma jiraan gudaha waxayna ku fiican yihiin ugu yaraan deyr dhexdhexaad ah.
Dhiig-baxayaasha ayaa jecel socod wanaagsan waxayna u baahan yihiin jimicsi fara badan. Waa in loo qaataa a socod dheer maalin kasta . Si kastaba ha noqotee, haddii ay soo qaaddo udgoon xiiso leh, waxaa laga yaabaa inaad ku adkaato inaad fiiro gaar ah u yeelato. Waxay leeyihiin heer adag oo adkeyn ah waxayna socon karaan saacado dhammaadka. Waxay si weyn ugu raaxeysan doonaan socodka adiga, laakiin maskaxda ku hay hamigooda ah inay baaraan wixii udgoon ee xiisaha leh. Ha ku ekeysiin socodka illaa ay si buuxda u koraan. Dhiig-baxa waa eey weyn oo si dhakhso leh u kora una baahan tamartiisa oo dhan si loo horumariyo lafaha, kala-goysyada iyo muruqyada adag.
Celcelis ahaan 8 - 10, qaar baa la ogaa inay haystaan ​​ilaa 15 arday oo hal qashin ah
Jaakad jilicsan oo gaaban, ayaa si fudud loo hagaajin karaa. Aroos ku xir gacmo gashi, oo maydh markii loo baahdo oo keliya. Is xoqin leh tuwaal qafiif ah ama chamois ayaa ka tagi doona jaakadda dhalaalaysa. Si joogto ah u nadiifi dhegaha dhaadheer ee jilicsan. Dhiig-baxayaasha ayaa leh ur nooc u eg oo u gaar ah. Noocani waa celcelis daadiya.
Noocani wuxuu ka badan yahay kun sano. Waxaa la dhammaystiray, oo aan la abuurin, by suufiyadii St. Hubert ee Belgium. Mar dambe eeyaha ayaa Normanku keeneen Ingriiska ka dibna Mareykanka. Waxaa sidoo kale loo yaqaan Flemish Hound. Dunida oo dhan, noocyada sida Coonhounds American, Swiss Jura Hounds, Reer Brazil Fila Brasileiro , Buundada Bavaria , iyo kuwa kale oo badan oo raad raac ah oo ay ku abtirsadaan raadraacyahan qadiimiga ah. Maanta, dhammaan Dhiig-baxayaasha waa madow & midab ama guduud, laakiin qarniyadii dhexe waxay ahaayeen kuwo adag midab ahaan. Noocyada cad, ee ka jiray Yurubta dhexe, waxaa loogu yeeri jiray Talbot Hound oo noqday bakhtiyey 1600-yadii, laakiin waxay gacan ka gaysatay horumarinta noocyo kale oo badan oo ay ka mid yihiin cad Feeryahano iyo saddex-midab Basset Hounds . Dhiig-qulqulatadu waxay ku faantaa ugaarsiga halkii ay ka ahaan lahayd dilka. Farxad weyn ayey ku qaadataa la socoshada waxaana loo adeegsaday ugaarsiga xayawaanka, dambiilayaasha, addoommada baxsadka ah iyo carruurta lumay. Maanta tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib u leh u gaar u leh iyo wehel. In kasta oo ay leedahay dabeecad wanaagsan, haddana ma sahlana in la addeeco tareenka, inta badanna waxaa ugu wacan xaqiiqda ah inay ka mashquusho amarka aadanaha, oo aad u danaynaysa dhammaan urta xiisaha leh ee hareerahiisa ku hareeraysan.
'Tani waa Flash Flash-kayga. Had iyo jeer waxaan arkaa Flash oo ku soo dhuuntaan alaabta guriga si aan u seexdo. Waan ku sii dhejinayaa sariiraha eygiisa, laakiin isagu wuxuu doorbidaa inuusan ku dul seexan. Waxaan u soo qaatay sawirradan si aan u caddeeyo in aanan ahayn kan wasakhda ku haya alaabta guriga. '
Dhiig-baxa ku shub fadhiga fadhiga
boston terrier bulug heeler mix
Sariirta ku iftiimiso Dhiig-baxa
Ku iftiimiso Dhiig-baxa ku fadhiisanaya kursiga jiifka
Eeyo yaryar, ma ku jirtaa halkaas? Ey yaryar oo la qorsheeyey dayrta 2000, sawirna waxaa iska leh MistyTrails Bloodhounds
Lahaanshaha sawirka MistyTrails Bloodhounds
Big Red toddobaadki 7½, sawir qadarin MistyTrails Bloodhounds
Eeg tusaalooyin badan oo ku saabsan Dhiig-baxa
Dhiig-baxa Sawirada 1
Dhiig-baxa Sawirada 2
Sawirada Dhiig-baxa 3
Dhiig-baxa Sawirada 4
Dhiig-baxa Sawirada 5
Dhiig-baxa Sawirada 6
Dhiig-baxa Sawirada 7
Eeyaha Dhiig-baxa: Sawirro guryo ah oo la ururin karo
casaan heeler shaybaarka isku dhafan
boston terrier iyo schnauzer isku qas